Nambarany tamin’izany fa ny sinoa sy karana aloha no tokony hofehezin’ny fanjakana voalohany raha te-hanafoana ny mpivarotra amoron-dalana izy ireo. Ny sinoa sy ny karana mantsy, hoy izy no tena mampiditra entana eto amintsika izay tsy mandoa hetra miainga any amin’ny fadin-tseranana… Izy ireo hoy izy no mamatsy entana ireo mpanao bizina mameno ny arabe amin’izao fotoana. Misy ihany koa hoy izy ireo mpivarotra mpangalatra fotsiny ihany ankoatra ireo tena tantsaha madinika mivaro-boankazo eny amoron-dalana… Tsy ny mpivarotra amoron-dalana rehetra, hoy izy no tokony hosamborina fa ireo mpangalatra sy mpibizina izay mameno ny arabe ary mampitombo ny vola any am-balahan’ireo sinoa sy karana. Ho an’ireo tena mpivarotra dia nomarihiny manokana fa tokony hamorona asa ho azy ireny ny fanjakana ka anisan’ireny ny raffinerie izay mpamokatra menaka… no sady hampihenana ny vidin’ny kojakoja ilaina amin’ny fiainana andavanandro eto amintsika ihany koa. Tokony homena tany hamokarany ihany koa ny tantsaha, hoy izy hahafahany mivelona fa tsy ny kely hananan’izy ireny indray no alaina bontolo sy totofana.